HIM | Health in Myanmar » 2011 » August
Myanmar Progress Report 2010
Here is the Myanmar progress report 2010. It reports progress towards implementing the national strategic plan. Few other countries report on implementation of their plans and Myanmar leads Asia in doing so.
Mouse to mouse ဆိုတဲ့ အသုံးကို နှလုံးမခုန်၊ အသက်မရှူတဲ့အခါ အရေးပေါ် ရှေးဦးသူနာပြုစုနည်း CPR နဲ့ ဆက်ပြီး၊ ပါးစပ်ကနေ လေမှုတ်သွင်းတာကိုသာ ခေါ်တယ်။ နှုပ်ခမ်းချင်းနမ်းတာကို Lip kiss လို ပြောတာ များတယ်။ တရားဝင် ခေါ်ကြတာက French kiss ဖြစ်ပါတယ်။
New Aidspan guidance on applying for Global Fund grants
Myanmar is eligible to apply for Global Fund resources for all three diseases. Check out the new Aidspan guidance on applying.
What 'critical juncture'?
The [him] moderator read with interest this article which is largely based on the press release from UNAIDS to coincide with the beginning of the ICAAP.
စေတနာအစစ်အမှန်ရှိပါသော်လည်း မသိလို့ ဖြစ်သွားရတဲ့ အမှားမျိုးကို တချို့ကိစ္စရပ်တွေမှာ ခွင့်လွှတ်လို့ရကောင်းပါရဲ့။ ။ကာယကံရှင်မှ စေတနာ နဲ့ ပြုလုပ်တဲ့ လုပ်ရပ် တခုမှာ ပေါ့ဆမှုကြောင့် မမှားသင့်ပဲ မှားမိသွားတဲ့အခါမျိုးကျတော့ ဘယ်လိုမှ ခွင့်လွှတ်နိုင်စရာ အကြောင်းမရှိပါဘူး ဆိုတာ သိစေချင်
ဗဂျိုင်းနားမှာ အပိုအဆာတွေ ဖြစ်တာ
အသက် ၂၆၊ မိန်းကလေး၊ အမည် (့)၊ နေရပ် (့)။ ကျွန်တော် ကောင်မလေးနဲ့ ပထမ ဆုံးအကြိမ် လိင်ဆက်ဆံတာ ထည့်မရပါ။ သူနာလို့ ရပ်လိုက်ပါတယ်။ တနာရီလောက် ကြာတော့ သွေးတွေ ဆင်းလာပါတယ်။ ပွန်းလဲ မပွန်းပါဘူး၊ အသားတွေလည်း ပဲ့တာ မရှိပါ။ အထဲထိ မရောက်ပါဘူး။ ဘယ်လိုမှ ထည့်မရခဲ့ပါ။ သွေးဆင်းက တော်တော်များပါတယ်။
Statement from many people at the ICAAP
Although this statement may be posted in other places, the [him] moderator found it only on the Asia Catalyst blogsite. It raisesacouple of questions in his mind.
“ယောက်ျားတွေက အင်္ဂါဂြိုလ်ကလာတာဖြစ်ဖြစ် မိန်းမတွေက သောကြာဂြိုဟ်ကလာလာ နှစ်ယောက်သား တွေ့ကြရင် ပေါင်းကူး ဆက်ပေးမဲ့ဟာ ရှိပါတယ်။ အနည်းဆုံးတော့
အိပ်ခန်းထဲမှာပေါ့” လို့ ဖတ်တဲ့သူတွေစိတ်ကို ဆွဲဆောင်တဲ့ အရေးအသားနဲ့ သတင်းကို ဖွင့်ထားပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ အပါအ၀င် အာရှ-ပစိဖိတ်ဒေသမှာ HIV-AIDS ရောဂါ ကူးစက်ပျံ့ပွားမှုကို တိုက်ဖျက်ရာမှာ ရေရှည်အောင်မြင်မှု ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ရမယ့် အရေးကြီးတဲ့ လမ်းဆုံလမ်းခွ တခုကို ရောက်နေပြီလို့ ကုလသမဂ္ဂက သတိပေးလိုက်ပါတယ်။
PSI at the ICAAP
Here isareport from PSI. The author talks aboutavast audience. How many people are there? Would someone from PSI please send him the papers presented by PSI about Myanmar?
The silent ICAAP
ICAAP 10 in Busan, Korea, could be known as the 'Silent ICAAP'. Or perhaps the 'Private ICAAP'.
Korean police getasurprise at the ICAAP
We all wait for the day when peaceful protest will be allowed in Myanmar. Korean police gotabit ofasurprise when they couldn't act without consequences yesterday. More video fromareader.